Real Madrid oo kooxda Atletico Madrid ka dalbatay inay isticmaasho garoonka Wanda Metropolitano… (Miyaa loo ogolaaday?) – Gool FM
(Madrid) 11 Juun 2020. Kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa ka dalbatay naadiga ay deris wadaagga yihiin ee Atletico Madrid inay isticmaasho garoonkeeda Wanda Metropolitano, balse waa laga soo diiday dalabkaas sida ay warinayso Jariiradda Marca.
Real Madrid ayaa laga soo diiday dalab ay u dirtay kooxda ay xafiiltamaan ee Atletico Madrid si ay ugu ciyaaraan garoonkooda Wanda Metropolitano kulammada harsan ee horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan.
Kooxda horyaalka u tartamaysa ayaa helay dalab ah inay isticmaalaan adeegyada garoonka qaarkood, marka ay ku ciyaarayaan habeenka Jimcaha ah, iyagoo bilaa taageere ah.
Laakiin Real Madrid ayaa iska diiday dalabkii Atletico, kaasoo dadka qaar u maleeyeen inay yihiin dhego hadal ah, kaddib markii Madaxweynaha Atletico ee Enrique Cerezo uu yiri: ‘Waan u heynaa Real Madrid haddii ay doonayaan inay ka ciyaaraan Wanda.’
Sheekadaas ayaa mowjado ka abuurtay dalka Spain, iyadoo Jariiradda Marca ay boggeeda hore ku soo qortay diidmada dalabka Real Madrid.
Real ayaan awoodin inay ku ciyaaraan garoonka Bernabeu illaa iyo dhammaadka xilli ciyaareedka, sababtoo ah waxaa ka socota shaqo dib u qaabayn ama dib u dayactir ah.
Garoonka ayaa laga qaaday cawskii yaalay, waxaana sidoo kale dhisme laga wadaa qeybaha fadhiga garoonka ay leedahay Los Blancos.
Shaqadu waxay la micno tahay in Real Madrid lagu qasbay inay aaddo meel kale, isla markaana ay kula tartanto Barcelona, hanashada horyaalka La Liga garoonkeeda yar ee Alfredo Di Stéfano Stadium oo ku yaalla Valdebebas.
Goobtaas ayaa leh 6,000 kursi, marka la barbar dhigo 67,000 oo kursi oo garoonka Wanda Metropolitano oo la dhisay sanadkii 2017, laguna beddelay Vicente Calderon.
Laakiin waa arrin u fiican Los Blancos oo ay ka faa’iideysan karto, maadaama ay jirto xadidaadda Jamaahiirta oo aan la ogolayn in wax taageerayaal ah oo gudaha u galaan garoommada, sabab la xiriirta faafaha Coronavirus.
Real Madrid ayaa kaliya labo dhibcood ka danbeysa Barcelona oo hoggaanka u haysa horyaalka La Liga, iyadoo ay ka harsan tahay in la ciyaaro kaliya 11 kulan, halka Atletico ay ku jirto kaalinta 6-aad kaddib kal ciyaareed aan wanaagsaneyn.
Kulanka ugu horreeya Real Madrid ee dib u soo laabashada horyaalka waxa ay ku ciyaari doontaa garoonka Alfredo di Stefano, iyadoo ka hor tagi doonta Kooxda Eibar fiidnimadda Axadda.